Masocial network nhasi | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino, pasocial network iwo ave akakosha kwazvo chikamu chedu chezuva nezuva. Iyo yakakwira muzana yenguva yatinoshandisa kubhurawuza mukati Internet, tinoisa mari mairi pasocial network.
Asi kwete chete aya maratidziro anongoitirwa vechidiki. Pasina kuenda mberi, nhasi tadzidza kuti mumusha unochengeterwa vakwegura kuSpain (muBadajoz, Extremadura) vaviri vakasiya basa vane makore makumi manomwe nemashanu uye makumi matanhatu nemapfumbamwe vanodzidzisa vamwe vavo kushandisa itsva technologies, kuvatanga munyika ye pasocial network.
Izvo hazvisi zvakanyanya kana kushoma pane a musangano wemakomputa mune vaviri vagari uye vaimbove vashandi vemakambani mune tekinoroji chikamu chichava vadzidzisi vatsva vecomputer yesainzi yevavo vanogara navo
Uye ndezvekuti ivo vanoti kushandiswa kwe pasocial network pakati peavo vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa yakakura ne 55% mukati memwedzi waMay 88, chiyero chinokwira kusvika kungangoita zana muzana pakati pevaya vanopfuura makumi matanhatu nemashanu panguva imwecheteyo yenguva. Saka kubva pane zvaunoona, vakuru vedu vakaona kufarira kutamba uye kusangana nevanhu paBadoo ... xD!
Unogona here kufungidzira sekuru nasekuru vachitsvaga Internet vachitsvaga shamwari nyowani, kana kutsvaga rudo? Zvakanaka, haufanire kushandisa zvakanyanya kufungidzira, nekuti kubva pane izvo zvatakaona, zvakajairika kupfuura zvatinofunga, shamwari dzinodiwa. Mumazuva avo madiki, vaisazofungidzira kuti kana vakura vaizowana XNUMXst century fomu yekushamwaridzana paBadoo. Kunyangwe paine vachiri nostalgic vanhu, vanosarudza kusangana nevanhu nenzira yakagara ichiitwa ... kusiya imba!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvemagariro midhiya nhasi
Carmen Sabino akadaro
Hahaha, kufarira kutamba uye kusangana nevanhu paBadoo… xD!
Pindura kuna Carmen Sabino
Alv akakosha dick prro kudhonza mwanakomana waamai vake bitch>: v